စိုးစန္ဒာ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်သူတွေကို ထိထိမိမိ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ခြူးလေး
ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးရင်း ထူးခြားတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ထူးချွန်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးနှစ်သက်ခြင်းကို အချိန်တိုအတွင်း ရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခြူးလေးကတော့ သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကို ကာရိုက်တာဝင်အောင် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်တတ်သူတစ်ဦးပါ။ လက်ရှိ ရုပ်သံလိုင်းမှာ ပြသနေတဲ့ နွေလယ်ညရဲ့လမင်း ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာလည်း စိုးစန္ဒာအဖြစ် ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ခြူးလေးကတော့ သူမရဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်သူတွေကို ပညာသားပါပါလေး ပြန်တုံ့ပြန်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ စကားပြောရင် ပြတ်သားတဲ့ ခြူးလေးပြောတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ အရမ်းကို ထိမိလွန်းပါတယ်နော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကာရိုက်တာကို အပြစ်ပြောနေကြသူတွေကို ထိထိမိမိ တုံ့ပြန်ပြောလာတဲ့ ခြူးလေးရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခြူးလေးကတော့ “အသက်မပါဘူး အသက်မပါဘူးပြောရအောင် မေးရဦးမယ် ……..ရှင်တို့ကော စိတ်ထဲမပါတာကို လုပ်ရင် အသက်တွေ ပါကြလား ….စိုးစန္ဒာ ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ခုထိ သူလုပ်သမျှတွေက သူ့စိတ်ထဲ မပါတာတွေ ဘဲ လုပ်နေမှတော့ ဘယ်လိုလုပ် အသက်ပါတော့မလဲ ….မေးရဦးမယ် ……ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အိုက်တင်ဘဲ ကြည့်ချင်ကြတာလား …..စိတ်ထဲမပါတာကို အတင်းကြီး camera ရှေ့လှည့်ပြ ငါစိတ်ထဲမပါဘူး ဆိုတာ လုပ်ပြ ဒီဘက်ပြန်လှည့် ပြန်ပြုံးပြ ဒါမျိုး ဘဲ ကြည့်ချင်ကြတာလား …ဘာဘဲပြောပြော အောင်မြင်တယ်ပြောရမယ် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အသက်မပါတာ တွေ့ရလို့ သီးသန့် လုပ်ပြနေစရာမလိုဘူးလေ …
တစ်ခုဘဲ ခုမြင်နေရတာ ခြူးလေး မဟုတ်ဘူး …. စိတ်ထဲမရှိတာတွေလျှောက်လုပ်နေတဲ့ စိုးစန္ဒာ …. ပါ အဝတ်စားလား မရိုင်းဘူး ဒီ့ထက် hot လို့ရသေးတယ် ….. သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူအောင် လုပ်နေရတာမို့ လျှော့ ထားတာ …..အပြင်မှာ အဲ့လို မိန်းမ အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ hot လိုက်မလဲ ဆိုတာ မသိတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကွယ်ကျေးဇူးပြု၍ ခြူးလေး နဲ့ စိုးစန္ဒာ လာမယှဉ်ပါနဲ့ ဒါနဲ့လေ ဘာမှ မလုပ်ရသေးပါဘူးကွယ် တကယ် ယုတ်မာတဲ့အခါကျမှ ဆဲနိုင်ဖို့ အားမွေးထားပါဦး အခုမှ အကင်းဘဲ ရှိသေးတယ် …..” ဆိုပြီး သူမစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ထိထိမိမိ ပြောထားတာပါ။
ခြူးလေးကတော့ လက်ရှိမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်တွေလည်း ထပ်ရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပြီး ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ကာရိုက်တာအတိုင်း သရုပ်ဆောင်ရတာကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရတဲ့ ခြူးလေးကို အားပေးစကားလေးတွေ ပြောသွားခဲ့ပါဦးနော်။
သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူ အမှတ်တရ ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ နန်းအမရာ
မန္တလေးက ချစ်တီးထမင်းဆိုင်မှာ ဝင်စားအပြီးငွေရှင်းမယ်အလုပ်မှာ အံ့သြစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့ ကြုံလိုက်ရတဲ့ လင်းလင်း
သရုပ်ဆောင်ဇင်မျိုးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးခင်ထွေးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးဈာပနမြင်ကွင်း ပုံရိပ်များ
သီချင်းလေးတွေသာမက အလှတရားတွေနဲ့ပါ ပုရိသတွေကို ဖမ်းစားထားတဲ့ အဆိုတော်မလေး (၃)ဦး